Kwisigaba esisiBini iFlange Factory | China Isigaba esikwisigaba esimbini seFlange Abavelisi, abaXhasi
Isigaba esisangqa esisangqa
Ingxubevange yentsimbi esisangqa
Umzobo 8 Flange Flange
Isicelo: Umsebenzi ophambili we-flange oyinyani ukwahlulahlula imveliso phakathi. Kukuthintela ukuvalwa kwevalvu kungavalwa, emva koko kuchaphazele imveliso, kwaye kubangele neengozi.
Isicelo: Iiflange ziyinxalenye ebalulekileyo yeeprojekthi zobunjineli kunye nemibhobho. Isetyenziswa kwiinkalo ezininzi ezahlukeneyo, ezinje ngezothutho (imibhobho, iinqanawa) zepetroleum, irhasi, amanzi, njl.njl. , kunye nezinto zabo nazo zahlukile (i-carbon yentsimbi ephantsi, i-alloy yentsimbi ephantsi, intsimbi engenasici, i-alloy steel high, i-non-ferrous steel, okanye enjalo) ngokuhambelana nohlobo lwamanzi kunye nendawo yenkonzo.
Slip kwiflange, ekwabizwa ngokuba yi-SO flange. Luhlobo lwesilayidi esisangqa phezu kombhobho uyilo lwangaphakathi lukhulu kancinci kunombhobho. Kuba ububanzi bangaphakathi kwesitshixo bukhulu kancinane kunobubanzi bangaphandle kumbhobho, i-SO esisangqa sinokudityaniswa ngokuthe ngqo kwizixhobo okanye kumbhobho nge-fillet weld phezulu nasezantsi kwe-flange. Isetyenziselwa ukufaka umbhobho kumngxunya ongaphakathi weflange.
Socket weleing esisangqa
Socket weld flange eyenziwe lula njenge-SW flange, inendawo ekhehliweyo (njengegxalaba) kwi-flange bore, eli gxa lisebenza njengesikhokelo sokuseta ubunzulu bombhobho obufakwe kwi-flange. Socket welding esisangqa eyenzelwe uxinzelelo oluphezulu inkqubo ngobubanzi amancinci imibhobho.
Isicelo: Iiflange ezinamakhonkco zisetyenziswa apho kunzima khona ukuwelda okanye kungenakudityaniswa, ezinje ngeentsimbi ezisetyenziselwa ukukhusela umaleko wemibhobho. Ukongeza, akufuneki isetyenziswe kwimibhobho enamaqondo obushushu aphindaphindiweyo okanye ngaphezulu kwama-260 ℃ nangaphantsi kwe -45 ℃ ngokunjalo.
Ke ngoko, iindleko zokufaka i-welding flange, iindleko zabasebenzi kunye neendleko zezinto ezincedisayo ziphezulu, kuba kukho inkqubo engaphezulu kwesinye.